Global Voices teny Malagasy » Mandrafitra Aterineto Mizakatena Fehezin’ny Fanjakana ny Manampahefana Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Mandrafitra Aterineto Mizakatena Fehezin'ny Fanjakana ny Manampahefana Rosiana
Voadika ny 28 Mey 2016 8:06 GMT 1	 · Mpanoratra Tanya Lokot Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Akon'ny RuNet
Vakiraokanb-tolo-dalàna vaovao mivelatra eo amin'ny kianjan'asa hametrahana ny RuNet Mizakatena. Sary avy amin'ny Wikipedia, CC-BY.
Mikarakara kianjan'asa hametrahana ny aterineto rosiana eo ambany fifehezan'ny fanjakana tanteraka amin'izao fotoana izao ny manampahefana rosiana ao amin'ny Minisiteran'ny Fifandraisana. Vakiraokan-tolo-dalàna tiana ampitondraina ny lohateny hoe “Momba ny Rafitra Aterineto Mizakatena,” ahafahan'ny sampan-draharaham-panjakana manana ny zo manontolo tsy ifampizarana na amin'iza na iza amin'ny fifampiraharahana izay mpitantana ny anaran-tsehatra nasionaly sy mpanome tolotra aterineto hisahana ny fampihodinana ny RuNet, ankoatra ny zavatra hafa.
Nitatitra  i Vedomosti fa ny tolo-dalàna izay mbola eo ampisavana ranonando sady mbola tsy voajerin'ny Minisitry ny Fifandraisana Nikolay Nikiforov, dia mampiditra fampahalalàna tsotra vaovao araka ny lalàna amin'ny filazana ny “fandrindrana araka ny lalàna ny anjara Rosiana eo amin'ny tambajotran'aterineto.” Manome alalana ny fanjakana ho afa-manaramaso ny fotodrafitrasa iankinan'ny ain-dehiben'ny RuNet ny tolo-dalàna, ka tafiditra amin'izany ny anaran-tsehatra nasionaly .ru sy .рф, toeram-pifanakalozan-jotra, ary ireo rafitra mizakatena sy tambajotra fananan'ny fikambanan'asa sy ny tsirairay.
Apetraky ny tolo-dalàna ihany koa ny fananganana rafi-pampahafantaram-panjakana miantoka ny fahamarinan-toeran'ny tambajotra iray manontolo, ary mifaningotra amin'ny rafitra anaran-tsehatra (DNS) mizakatena miaraka amin'ny fanomezana adiresy IP sy ny fahafahana manaramaso ny zotran'aterineto. Izany dia mamaly ny fanamabarana nataon'ny manampahefana rosiana milaza fa mila manana tahirin-drafitra azy manokana tokony “misaraka” amin'izao tontolo izao i Rosia.
Fanampin'izany, ny loharanom-baovaon'i Vedomosti izay tsy vahiny amin'ity vakiraokan-tolo-dalàna ity dia milaza fa ny tompon-tambajotra mifanakalo zotra aterineto amin'ny iraisampirenena, dia tsy maintsy hametraka karazana mpanaramaso famindran-jotra, hanalava ny tanan'ny rafitra fanarahamasom-panjakana rosiana antsoina hoe SORM.
Ny anaran-tsehatra .ru sy .рф amin'izao fotoana izao dia tantanin'ny Foibe Fandrindrana ny tambajotran’ Anaran-tsehatra Aterineto Nasionaly, fikambanana tsy ara-barotra iray izay mamoaka ny fanomezana alalana ireo misoratra anarana hampiasa ny anaran-tsehatra sy mandrindra ny fitsipiky ny fisoratana anarana. Ireo toeram-pifanakalozan-jotra ao Rosia dia an'ny orinasa maro, saingy ny lehibe indrindra amin'izy ireny dia ny MSK-IX, izay fehezin'ny orinasam-pifandraisandavi-panjakana Rostelekom.
Na dia mbola eo amin'ny dingana fanombohana aza ny vakiraokan-tolo-dalàna ary mety hahazo fanitsiana maromaro, raha lasa lalàna, dia ho eo ambany fifehezan'ny fanjakana rosiana tanteraka ny ain-dehiben'ny fotodrafitrasan'ny RuNet iray manontolo, ary mety hanety (hanakely) ny sehatra hiafenana anarana sy ny feo hafa ao amin'ny RuNet.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/28/83257/